Oku vidiyo n'etiti mmadu abuo site na ngwa Google ohuru, Duo | Gam akporosis
Ozugbo ị webatara Allo, ọhụrụ ozi ngwa nke ga-abata ke ndaeyo nakwa na ọ ga-enwe atụmatụ njiri mara mma, Google agafeela ịkpọsa Duo, nzọ gị maka oku vidiyo site na ngwa di mfe.
Duo bụ ngwa oku vidiyo na na-elekwasị anya na nkwurịta okwu n'etiti mmadụ abụọ dịka aha ya pụtara. O nwekwara atụmatụ ndị dị ịrịba ama maka ịdị mfe na ịdị mfe nke iji enweghị mmezi ọ bụla.
Otu n'ime njirimara ya bụ na mgbe oku na-abata You nwere ike ịhụ vidiyo nke onye na-akpọ gị, nke mere na ị nabatara oku ahụ wee banye na mkparịta ụka n'etiti ha abụọ. Naanị ihe ọ chọrọ bụ na e nwere ụzọ ọzọ ị ga-esi na-emekọrịta ihe n'etiti ndị ọrụ yana na ọ na-aga n'otu ụzọ ahụ dịka Allo, nke nkwupụta na nkwukọrịta n'etiti ndị mmadụ bụ otu n'ime ọrụ ya dị oke mkpa.
Ewezuga nke a, enweghi obere ihe gbasara ngwa ndị ọzọ dịka Hangouts. Chefuo mkparịta ụka ekwentị, izu izu, ma ọ bụ mgbakwunye ndị ọzọ. Duo na-aga na isi enweghị ihe ọ bụla karịa nke a.
Ee, Ka anyị ghara ichefu banyere àgwà nke oku na ndị a na-abanye n'enweghị isi nsogbu. Nke a bụ ihe Google zoro aka oge niile site na ntanetị na Google I / O nke, site n'ụzọ, n'oge a ọ nọ n'èzí na-enye ahụmịhe ọzọ nye anyị abụọ ndị gbasoro iyi ahụ na ndị nọrịị nke ọma Ebe ahụ.
Ma Allo na Duo ga-abụ dị n'oge ọkọchị, n'ihi ya, anyị ga-ege ntị na ngwa abụọ ahụ rutere ịgbanwe usoro nkwukọrịta, ntakịrị ngwụrọ na Hangouts, nke Google nwere.
Naanị ihe anyị na-ahụbeghị bụ olee otu ha ga - esi jikota dị ka ha dị ka ụmụnne nwanyị ejima n'akụkụ ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Duo bụ ngwa oku vidiyo ọhụụ maka gam akporo na iOS nke na-elekwasị anya na ịdị mfe nke ojiji
Ulo Google bu onye inyeaka zuru oke nke ulo gi